Herbert Hainer Madaxweynaha Kooxda Bayern Munich Ayaa Amaan Dul Huwiyey Thomas Muller? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Thomas Muller wuxuu muhiim u yahay Bayern sida Oktoberfest wuxuu u yahay magaalada Munich sida laga soo xigtay madaxweynaha kooxda Herbert Hainer.
Muller ayaa saxiixay heshiis cusub Salaasadii shalay si uu ula sii joogo kooxda heysata horyaalka Bundesliga ilaa 2023.
30-jirkan ayaa mustaqbalkiisa ciyaareed oo dhan la qaatay kooxda Bayern wuxuuna u saftay kooxda 521 kulan isagoo u dhaliyay 195-gool wuxuuna caawiyay 146 caawin tan iyo markii ugu horeysay ee uu saftay sanadkii 2008.
Taasi waxay keentay in Hainer uu isbarbar dhigo halyeeygii hore ee Jarmalka mid ka mid ah dhacdooyinka ugu caansan Munich.
“Dabcan waa war aad u wanaagsan aad ayaan u faraxsanahay markii aan maqlay,” ayuu yiri isagoo ka soo xiganaya qoraalo lagu daabacay barta Twitter-ka ee Bayern.
“Thomas Muller waa geesi, astaamaha FC Bayern Munich Waxa uu ku qaatay mustaqbalkiisa ciyaareed oo dhan halkaan waana uu ku soo barbaaray bilihii ugu dambeeyay intii uu joogay Hansi Flick.
Waxa uu siiyaa caawimaad aad u badan, waa ciyaaryahan aad u fiican, waxaana qabaa in Thomas Muller uu ka tirsanyahay FC Bayern, sida Oktoberfest uu iska leeyahay magaalada Munich Marka taas la eego, taasi runtii waa war weyn. ”
Muller ma ahan qofka kaliya ee furaha u ah kooxda Bayern ee qalinka ku duugay maalmihii ugu dambeeyay, iyadoo Flick ay aqbashay heshiis uu kusii ahaan doono macalin joogto ah usbuucii hore.
Flick ayaa si kumeel gaar ah ula wareegtay bishii Nofeembar isla markaana Bayern ayaa 15 kulan aan looga adkaan, iyagoo badiyay 14 ka mid ah kulamadaas ka hor intaan tartamada la joojin sababo la xiriira cudurka coronavirus.
“Markii arrinta loo keenay guddiga kormeerka, waxaan sameynay go’aan deg deg ah oo aan mideysaneyn,” ayuu yidhi Hainer oo ka hadlaya heshiiska Flick.
“Markaad tahay madaxa kooxda FC Bayern Munich, dabcan waxaa lagu cabiri doonaa horyaalo taasna runtii waxay ku dhici doontaa Hansi Flick.
“Laakiin waxaan si buuxda ugu qanacsanahay Hansi Flick Hadaad fiiriso wuxuu la shaqeeyay kooxda bilihii lasoo dhaafay kaliya ma uusan helin kooxdu inay guuleysato laakiin sidoo kale waa qaabka ay kooxdu u ciyaarto.
Waxay ciyaaraan qaab cajiib ah, soojiidasho badan kubado weerar ah waxay dhaliyaan goolal badan waxayna guuleystaan ​​inta badan ciyaaraha “Horey ayey u fiicnaayeen, laakiin waxaan ku qanacsanahay Hansi Flick inay sii wadi doonto horumarinta kooxdaan.”